Fact Sheet Myanmar 2017 by Mae Fah Luang University - issuu
မယ့်ဖါလွမ်တက္ကသိုလ်သည် အာဆီယံသုံးနိုင်ငံဆုံမှတ် မဲေ ခါင်ရွှေတြိဂံနယ်မြေ၏၀င်ပေါက်တံခါးဝတွင်တည်ရှိပါသည်။၁၉၉၈ ခုနှစ်ကတည်းက သီခြားအုပ်ချုပ်မှုနယ်ပယ်(သီးခြားတက္ကသိုလ် အ ဖြစ်) တည်ထောင်ခဲ့ပါသည်။ ဤတက္ကသိုလ်ကို ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်၏ မယ်တော်မိဖုရားခေါင်ကြီး သီရိနာဂရင်ဒြာ (Her Royal Highness Princess Srinagarindra) မှ ထိုင်းနိုင်ငံ မြောက်ပိုင်းသားများနှင့် အိမ်နီးချင်းနိုင်ငံများမှ ကျောင်းသူကျောင်းသားများ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး အကြင်နာကြီးစွာဖြင့် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ သူမကိုလေးစားဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် မယ့်ဖါလွမ် တက္ကသိုလ်ဟု ခေါ်ဆိုခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆယ်စုနှစ်နှစ်ခုနီးပါး ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုကြောင့် မယ့်ဖါလွမ် တက္ကသိုလ်သည် ထိုင်းနိုင်ငံ၏ အမြန်ဆုံးတိုးတက်လာ သောအဆင့်မြင့်ပညာရေးအဖွဲ့အစည်းတစ်ခု အဖြစ်သတ်မှတ်ခံထားရပါသည်။ “ပန်းဥယျာဉ်ထဲမှတက္ကသိုလ်” ဟူသောအယူအဆ အကျိုးတရားကြောင့် နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်း လာရောက်ကြသော ဧည့်သည်တော်များအားလုံးနှင့် ကျောင်းသူ ကျောင်းသားများအားလုံးကို ပတ်ဝန်းကျင် ယဉ်ကျေးမှုထုံးစံများနှင့် ပျော်ရွှင်စွာနေထိုင်ရင်း စာပေပညာသင်ကြားလိုချင်စိတ်ကို ဆွဲဆောင်ဖြစ်ပေါ် စေပါသည်။ပျော်ရွှင်ဖွယ် အရာများကို ခံစားကြည့်ရန် မယ့်ဖွါလွမ် တက္ကသိုလ်မှ ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာမှလာတက်ကြသောကျောင်းသူကျောင်းသားများအား လုံးနှင့် ဒေသခံပြည်သူကျောင်းသားကျောင်းသူများ အချင်းချင်း ပူးတွဲဆောင်ရွက်တတ်ရန် ၊ပါဝင်ကူညီတတ်ရန်၊တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ကူညီစာနာတတ်ရန်တို့ကို ရည်ရွယ်ပါသည်။ နိုင်ငံတကာရေးရာအဖွဲ့အစည်း (The International Affairs Division) ကလည်းကျောင်းသားကျောင်းသူများအား လုံး၏ လိုအပ်ချက်များကို ကူညီဖြည့်စည်းပေးပါသည်။ သင်တို့၏ အနာဂတ်ထွန်းလင်း တောက်ပဖို့ဆိုရင်တော့ မယ့်ဖွါလွမ် တက္ကသိုလ်ကို ဦးစားပေးစဉ်းစားပါရန် မယ့်ဖွါလွမ် တက္ကသိုလ်မှ လှိုက်လှဲစွာကြိုဆိုဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်။
အာဆီယံဒေသအတွင်းရှိ စိုက်ပျိုးရေးစက်ရုံများတွင် အဆင့်မြင့် သင်ကြားခြင်း နှင့် သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းဖြင့် အရည်အချင်းပြည့်မှီသော ၊ကျွမ်းကျင်ထူးချွန်သော ၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည်ဝ၍ ဦးဆောင်နိုင်သော စိုက်ပိ်ျုးရေးကျောင်းဆင်းများ ၊ စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ် ထုပ်ပိုးကျွမ်းကျင်သော အသိပညာရှင် ၊ အတတ်ပညာရှင်များ ထွက်ပေါ်လာစေရန်အထူးအလေးပေး သင်ကြားလေ့ကျင့်ပေးနေပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.Sc. in Food Technology (အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာသိပ္ပံဘွဲ့ ) •	B.Sc. in Technology Management of Agricultural Produces and Packaging	(စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် ထုပ်ပိုးခြင်းဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှု နည်းပညာဘွဲ့ ) ဘွဲ့  လွန် •	M.Sc. and Ph.D. in Food Technology (အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့ ) •	M.Sc. in Technology Management of Agricultural Produces (စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်ရေးဆိုင်ရာ စီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ မဟာဘွဲ့ )
အလှအပဆိုင်ရာ နည်းပညာနယ်ပယ်တွင် ထိုင်းနိုင်ငံသည် ရှေ့ဆောင်ပထမဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်တည်ထောင်ထားသော ကြောင့် ကျောင်းသူ ၊ကျောင်းသားများကို သုတေသနပြုခြင်း ၊ ခေတ်မီ၍ ခေတ်ရှေ့ပြေးသော အသိပညာ ၊ အတတ်ပညာများဖြင့် လေ့ကျင့်မှု ၊ စမ်းသပ်မှုများစွာဖြင့် အထူးသင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည် ။ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်း အလှအပဆိုင်ရာနည်းပညာနယ်ပယ်တွင် အဆင့်အမြင့်ဆုံး ကျောင်းအဖြစ် မကြာမီကာလအတွင်းထိုးဖောက် အောင်မြင် မည်ဟုခိုင်မာသောယုံကြည်ချက်ဖြင့် တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ဘွဲ့  လွန် •	M.Sc. and Ph.D. in Anti-Aging and Regenerative Medicine (နုပျိုခြင်းနှင့် နုသစ်စေသောဆေးဖက်ဆိုင်ရာ မဟာဘွဲ့ နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့ ) •	M.Sc. and Ph.D. in Anti-Aging and Regenerative Science (နုပျိုခြင်းနှင့် နုသစ်စေသောဆေးသိပ္ပံ မဟာဘွဲ့ နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့) •	M.Sc. and Ph.D. in Dermatology (အရေပြားရောဂါဗေဒ မဟာဘွဲ့ နှင့် ဒေါက်တာဘွဲ့)
အလှပြင်ပစ္စည်း ဆိငုရ်ာနည်းပညာ ဘာသာရပ်ကျောင်း COSMETIC SCIENCE အာဆီယနံငို င်မျာံးထဲတငွ် ပထမဦးဆံုး အဖွဲ့ အစည်းအဖြစ် ဂုဏယ်စွူာ ဖြင့် အလှအပဆိငုရ်ာ နည်းပညာရပ်များကို သင်ကြားပေးလျက်ရပှိါသည်။ အလှအပဆိငုရ်ာကိစရ္စ ပ်များကို အထူးစိတ၀်င်စားသော ကျောင်းသားကျောင်းသမျူားအတွက် အကောင်းဆုးံ ဘာသာရပ် ဖြစ်ပါသည်။ သက်ဆငို ရ်ာဘာသာတိငုးကို အခြေခံမစှပြီး လက်တွေ့အသံုး ချနိငုသ်ည်အထိ သင်ကြားပေးပါသည်။ အလှကနုထ်တုလ်ပုေ်ရးစက်ရုံ များ ဖွင့် နိငုသ်ည်အထိ ကျွမ်း ကျင်အောင် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရပှိါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.Sc. in Beauty Technology (လှပခြင်းဆိုင်ရာ နည်းညာ) •	B.Sc. in Cosmetic Science (အလှပြင်ပစ္စည်း ဆိုင်ရာနည်းပညာ) ဘွဲ့  လွန် •	M.Sc. and Ph.D. in Cosmetic Science (အလှပြင်ပစ္စည်းဆိုင်ရာနည်းပညာ မဟာဘွဲ့ နှင့်ဒေါက်တာဘွဲ့ )
ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာနည်းပညာရှင်များကို မွေးထုတ်ပေးရန် ရည်ရွယ်ချက်ဖြင့် အဆင့်မြင့် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းနှင့် စာရိတ္တပိုင်းဆိုင်ရာ အရည်အသွေး မြင့်မားစေရန် နိုင်ငံတကာအဆင့်မှီနည်းပညာများဖြင့် သင်ကြားပေးလျက် ရှိပါသည။်သက်ဆိုင်ရာ ဘာသာရပ်တိုင်းကို အခြေခံမှစပြီး လက်တွေ့အသုံးချနိုင်သည်အထိ ရိုးရာနည်းပညာ ဒေသဆိုင်ရာနည်းပညာ များနှင့်ခေတ်မီနည်းစနစ်တို့ကိုပေါင်းစပ်၍ ထူးခြားဆန်းသစ်သောပညာရပ် များကိုသင်ကြားပေးပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.ATM. in Applied Thai Traditional Medicine (Students must be fluent in Thai) (အသုံးချထိုင်းဆေးဝါးကျွမ်းကျင်) (တက်ရောက်လိုသောကျောင်းသားသည် ထိုင်းစကား ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောနိင်ရမည်။) •	B.CM. in Traditional Chinese Medicine (တရုတ်ရိုးရာဆေးပညာ်) •	B.PT. in Physical Therapy (Students must be fluent in Thai) (အကြောကိုင်နည်းပညာကုထုံး) (တက်ရောက်လိုသောကျောင်းသားသည် ထိုင်းစကား ကျွမ်းကျင်စွာ ပြောနိင်ရမည်။) •	B.P.H. in Public Health (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး) •	B.Sc. in Environmental Health (ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနည်းပညာ်) •	B.Sc. in Occupational Health and Safety (ကျန်းမာရေးနှင့်လုံခြုံရေးကိုထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ခြင်း) •	B.Sc. in Sports and Health Science (အားကစားနှင့် ကျန်းမာရေးနည်းပညာ) ဘွဲ့  လွန် •	M.Sc. in Public Health (ပြည်သူ့ကျန်းမာရေး)
မယ့်ဖွါလွမ် တက္ကသိုလ်၏ တိုးတက်မှုအမြင့်ဆုံးဘာသာရပ်ဖြစ် သည်။ ကမ္ဘာအဆင့်မှီ ဘွဲ့ရပညာတတ်များနှင့် သုတေသနပညာရှင်များ ပေါ်ထွက်လာရေးအတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ စိတ်ကူးဥာဏ် အမျှော်အမြင် ကြီးမားပြီး၊ အားကျဂုဏ်ယူ ဖွယ်ကောင်းသော ၊ ကမ္ဘာ့အဆင့်မှီသော၊ အမြင်စူးရှသော ဆန်းသစ်တီထွင်နိုင်သောအ တတ်ပညာရှင်များ ကိုယ်တိုင် ဘက်စုံထောင့်စုံမှ ပြိုင်ဘက်ကင်းအ တတ်ပညာရှင်များဖြစ်လာစေရန် ပြုစုပျိုးထောင် ပေးလိုသည့်အတွက် မယ့်ဖွါလွမ်တက္ကသိုလ်၏ သတင်းနှင့် နည်းပညာဌာနမှ လှိုက်လှဲ နွေးထွေးစွာ ကြိုဆိုနေပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.Eng. in Computer Engineering (ကွန်ပျူတာ အင်ဂျင်နီယာ) •	B.Eng. in Information and Communication Engineering (သတင်းနှင့် ဆက်သွယ်ရေးအင်ဂျင်နီယာ) •	B.Sc. in Computer Science (ကွန်ပျူတာသိပ္ပံ) •	B.Sc. in Information Technology (သတင်းနည်းပညာ) •	B.Sc. in Multimedia Technology and Animation (ရုပ်သံလုပ်ရှားမှုနှင့် တင်ဆက်မှုနည်းပညာ) •	B.Sc. in Software Engineering (ဆော့ဖ်ဝဲ အင်ဂျင်နီယာ) ဘွဲ့  လွန် •	M.Eng. and Ph.D. in Computer Engineering (ကွန်ပျူတာအင်ဂျင်နီယာမဟာဘွဲ့ နှင့်ဒေါက်တာဘွဲ့) •	M.Sc. in Information Technology (သတင်းနည်းပညာမဟာဘွဲ့)
အရည်အသွေးပြည့်မှီသောသူနာပြု များကို မွေးထုတ်ပေးနိုင်သောကြောင့် ပြည်တွင်းတွင်သာမက နိုင်ငံတကာကပါ အသိအမှတ်ပြုလက်ခံပါသည်။ ထိုင်းနိုင်ငံမြောက်ဖက် အထက်ပိုင်းဒေသနှင့် မယ်ခေါင် နယ်စပ်ဒေသ တွင် မီးပြတိ်ုက်သဖွယ် လမ်းပြ၍ ကျန်းမာရေးပြုစုစောင့်ရှောက်နိုင်ရန်ရည်ရွယ်ပြီး ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ သူနာပြုအကူသင်တန်း •	Cert. for Practical Nursing (Only for Thai citizens) (အသိအမှတ်ြပုလက်မှတ်ပေးမည်) (ထိုင်းနိုင်ငံသားများသာ) ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.S.N. in Nursing Science (Only for Thai citizens) (သူနာပြု ဘွဲ့) (ထိုင်းနိုင်ငံသားများသာ)
ရိုးရိုးဘွဲ့  •	LL.B. in Laws (Students must be fluent in Thai) (ဥပဒေ) (ကျောင်းသားများသည်ထိုင်းဘာသာစ ကားကိုကျွမ်း ကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။) ဘွဲ့  လွန် •	LL.M. in Laws (Students must be fluent in Thai) (ဥပဒေမဟာဘွဲ့ ) (ကျောင်းသားများသည် ထိုင်းဘာသာစကားကိုကျွမ်း ကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည်။)
ထိငုးနငို င်နံငှ့် ၄င်း၏ အနီးတစ်ဝကို ရ်ှေိ ဒသများမှ အစိုး ရဌာနဆိငုရ်ာများ၊ စက်မလှု က်မှု လုပင်န်းများ၊ အာဆီယကံူး သန်းရောင်းဝယ်ရေး တို့ အတွက် လုအိပ်သော လက်မအှု တတ်ပညာကျွမ်းကျင်သ၊ူ ခေတ်ပ်ညာတတ်လငူယ်များစွာကို မွေးထုတရ်န် ရည်ရယွပ်ါသည်။ စီး ပွားရေးဆိငုရ်ာဘာသာများစွာထဲမှာ အရေးပါဆံုး သောစီမခံန့်ခွမှဲု ဘာသာရပ်များဖြစ်ပါသည်။ ကျယ်ပြန့်သောကြီးကျယ်ခန်းနားသည့် ကမ်းလမ်းမှမျှုားကို ဘာသာရပ်ဆငို ရ်ာ သင်ရိးု ညွန်း တမ်းအမျိုးမျိုးတို့ ဖြင့် ခေတ်မစှီ နစ်ကျလှစွာ သင်ကြားပေးနေသည့်အပြင် အကျိုးအမြတ်အနေအ ဖြင့်နိငုင်ရံပ်ခြားရှိ နာမည်ကြီး တက္ကသလို မ်ျားသို့ အပြန်အလှနသ်ွားရောက် သင်ကြားနိငုေ်သာ အခွင့် အရေးများကို ချိတဆ်က်ပေးထားပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.Acc. in Accounting (စာရင်းကိုင်) •	B.B.A. in Aviation Business Management (လေကြောင်းစီမံ) - Aviation Services (လေကြောင်းဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှု) - Aviation Logistics Business (လေကြောင်းဆိုင်ရာထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး) - Aviation Operations (လေကြောင်းဆိုင်ရာပြုပြင်ပြင်ဆင်ခြင်း) •	B.B.A. in Business Administration (စီးပွားစီမံ) •	B.B.A. in Hospitality Industry Management (ကြိုဆိုဧည့်ခံရေးစီမံခန့်ခွဲမှု) •	B.B.A. in Logistics and Supply Chain Management (ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ) •	B.B.A. in Tourism Management (ခရီးသွားလုပ်ငန်းစီမံခန့်ခွဲမှုနည်းပညာ) •	B.Econ. in Economics (စီးပွားရေး) ဘွဲ့  လွန် •	M.B.A. and Ph.D. in Business Administration (စီးပွားရေးဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း) •	M.B.A. in Logistics and Supply Chain Management (ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး၊ဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာ)
နိငုင်ြံ ခားဘာသာစကားမျိုးစုနံငှ့် ယဉ်ကျေးမှု တိက့ုို အရည်အသွေး ပြည်ဝစွာဖြင့် တတ်မြောက်နင်ိုြ် ပီး သင်ထောက်ကပူစ္စည်း စံလုင်စွာ ဖြင့် အကောင်းဆံုး သင် ကြားပေးရန်ရည်ရယွခ်ျက်ဖြင့် ဖွငလ့် စှထ်ားပါသည်။ ထိငုး ဘာသာစကားနှင့် နိငုင်ြံ ခားဘာသာစကားမျိုးစုံ အတွက် ထူးချွန်ေပြာင်မြောက်သောသူ များဖြစ်လာစေနိငုေ်သာကျောင်းဖြစ်ပြီး နိငုင်တံကာနှငပ့် တ်သက်၍ စည်းမျဉ်းဥပဒေများနှင့် အစီအစဉ်များကို လေ့လာသင်ကြားရရှနိငိုေ် သာ ပြိုင်ဖက်မရှအိကောင်းဆံုး ကျောင်း ဖြစ်သည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.A. in English (အင်္ဂလိပ်အထူးပြုဘာသာ) •	B.A. in Thai Language and Culture (ထိုင်း ဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှု) ဘွဲ့  လွန် •	M.A. and Ph.D. in English for Professional Development (အင်္ဂလိပ်စာအထူးပြု မဟာဘွဲ့ နှင့်ဒေါက်တာဘွဲ့)
သိပဘံ္ပာသာရပ်များကျောင်း
ခေတ်မသီပိပံ္ပ ညာရပ်များကိစုဉ်ဆက်မပြတ် ကြိုးပမ်းလေ့လာပြီး နိငုင်တံကာ၏ တိုး တက်မလှုပုရ်ှားမှု နည်းပညာများ ၊ပညာရေးအရည်အသွေးမြှငတ့် င် ခြင်းများကို အဆက်မပြတ် လေ့လာသင်ကြားပေးခြင်းဖြင့် ကျွမ်း ကျင်၊ တော်ထက်မြက်သော ပညာတတ်များကိေုမွးထုတြ် ခင်းဖြင့် သိပနံ္ပ ငှန့် ည်းပညာ ၊စီးပွါးရေး၊ လူမှေုရးနှင့် ပတ်ဝန်းကျင်ဆငို ရ်ာများကို ဖြွံ့ ဖိုးတိုး တက်မမျှုားကိရုရှိ စေရန် ဖြစ်ပါသည်၊၊ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.Sc. in Applied Chemistry (အသုံးချ ဓါတု) •	B.Sc. in Biosciences (ဇီဝသိပ္ပံဘွဲ့ ) •	B.Eng. in Materials Engineering (ရုပ်ဝတ္ထုပိုင်းဆိုင်ရာအင်ဂျင်နီယာ) ဘွဲ့  လွန် •	M.Sc. and Ph.D. in Applied Chemistry (အသုံးချဓါတု) •	M.Sc. and Ph.D. in Biosciences (ဇီဝသိပ္ပံဘွဲ့ ) •	M.Sc. and Ph.D. in Biotechnology (ဇီဝနည်းပညာ) •	M.Sc. and Ph.D. in Computational Science (ကွန်ပျူတာဆိုင်ရာ နည်းပညာ) •	M.Sc. and Ph.D. in Materials Science (ရုပ်ဝတ္ထုဆိုင်ရာနည်းပညာ)
တရုတ်နိုင်ငံ၏ ယဉ်ကျေးမှု ၊ စီးပွါးရေး ၊ လူမှုရေး ၊နိုင်ငံရေး နှင့်နိုင်ငံတကာဆက်ဆံရေး စသည့် ကဏ္ဍများနှင့် ပတ်သက်၍ သေချာနားလည်သဘောပေါက်စေရန် ၊ တရုတ်ဘာသာစကား ၊ ဘာသာရပ်သင်ခန်းစာ လေ့လာသင်ယုမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွမ်းကျင်နားလည် တတ်မြောက်သော အရည်အချင်း များနှင့် ပြည်စုံသော ဘွဲ့ ရပညာတတ်များကို အထောက်အကူဖြစ်စေရန် ရည်ရွယ်ဖွင့်လှစ်ထားပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့  •	B.A. in Business Chinese (လုပ်ငန်းသုံး တရုတ်ဘာသာ) •	B.A. in Chinese Language and Culture (တရုတ်ဘာသာစကားနှင့် ယဉ်ကျေးမှု) •	B.A. in Chinese Studies (Focused on the Policy and Strategy of China) (တရုတ်နိုင်ငံရေးနှင့် သေနင်္ဂဗျူဟာအတတ် အနီးကပ်ပို့ချခြင်း ၊လေ့လာခြင်း) •	B.Ed. in Teaching Chinese Language (5 years) (တရုတ်ဘာသာဆရာအတတ်သင်) (၅နှစ်) ဘွဲ့လွန် ဘွဲ့  လွန် •	M.A. in Chinese - Thai Translation and Interpretation (တရုတ်-ထိုင်း ဘာသာပြန်ဆိုခြင်းနှင့် အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုခြင်း) ( * တရုတ်ကျောင်းသားများလက်မခံပါ ။) (** ကျောင်းသားများသည် တရုတ်နှင့် ထိုင်းဘာသာစကား နှစ်မျိုးစလုံးကို ကျွမ်းကျင်စွာပြောဆိုနိုင်ရမည် ။) •	M.A. in Teaching Chinese asaForeign Language (မာစတာဘွဲ့လွန်တွင်တရုတ်ဘာသာစကားကို နိုင်ငံခြားဘာသာစကားအဖြစ်သင်ကြားသည်။)
ဆန်းသစ်သောလူမှုဆက်နွယ်ချက် ဆိုင်ရာကျောင်း SOCIAL INNOVATION ကျောင်းသား၊ကျောင်းသူများကို ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာ လူမှု ရေး ၊စီးပွါးရေးသုံးသပ်ချက်များ ၊ ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်နေသောစီမံကိန်းများ ၊ဆက်သွယ်ချက်များ လူမှုကွန်ယက်များ ၊ ကမ္ဘာလုံး ဆိုင်ရာ ဆက်သွယ်မှု ၊နိုင်ငံများ၏ တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုများကို အားလုံးပေါင်းစပ်၍ အနီးကပ် သင်ကြားပေးပါသည်။ ကျောင်းသားများ ယဉ်ကျေးမှုအဖုံဖုံ ၊လူနေမှုစရိုက်အမျိုးမျိုး ကို သိရှိနားလည်ပြီးကမ္ဘာတ ၀ှမ်း တိုးတက်အောင်မြင်ဖွံ့ဖြိုးမှုကို ကိုယ်တွေ့လုပ်ဆောင် နားလည်နိုင်စေရန် သင်ကြားပို့ချပေးနေပါသည်။ ရိုးရိုးဘွဲ့ 
•	B.A. in International Development
(နိုင်ငံတကာဆိုင်ရာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဘွဲ့ )
ကျောင်းလျှောက်ရန် ၁ ။ ။ ကျောင်းလျှောက်ရန်လိုအပ်ချက် • ဘာသာရပ်ရွေးချယ်ခြင်း(ဘာသာရပ်များထဲမှနှစ်သက်ရာတစ်ခုရွေးပါ)
၂ ။ ။လျှောက်လွှာပုံစံဖြည့်ပြီးပို့ရန် • လျှောက်လွှာပုံစံကို ၀က်ဘ်ဆိုဒ်များမှဒေါင်းလုတ်လုပ်၍ • ဖြည့်စွက်ပြီးအောက်ပါဌာနများသို့ပေးပို့နိုင်ပါသည်။
International Affairs Division (IAD) Mae Fah Luang University 333 Moo 1, Thasud, Muang Chiang Rai 57100 Thailand E-mail: inter@mfu.ac.th Fax: +66 (0) 5391 6023
၄။ ။ကျောင်းရောက်ရမည့်အချိန် • နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအားလုံးကျောင်းအပ်စရင်းမသွင်းခင် တစ်ပတ်အလိုတွင်အရောက်လာရမည်။
၅။ ။ကျောင်းအပ်ခြင်း • လိုအပ်သောထောက်ခံစာမူရင်းများကိုမိတ္တူကူးပြီး ကျောင်းသား ရေးရာဌာနသို့ပေးပို့ရမည်။ • တစ်ကြိမ်အမည်စာရင်းသွင်းပြီး ကျောင်းလခအပြည့်သွင်းပြီးပါက မယ့်ဖါလွမ် တက္ကသိုလ်၏ တရားဝင်ကျောင်းသားဖြစ်ပါပြီ။
ကျောင်းအချိန်ဇယား ပထမနှစ်ဝက်စာသင်နှစ် • ပထမနှစ်ဝက်စ စာသင်ခြင်း • ပထမနှစ်ဝက်စာသင်ပြီးဆုံးခြင်း
သြဂုတ်လ လလယ် ဒီဇင်ဘာလ လလယ်
ဇန္န၀ါရီလ အစ မေလနောက်ဆုံးအပါတ်
ဇွန်လ အစ ဇူလိုင်လ နောက်ဆုံးအပါတ်
မယ့်ဖွါလွမ်ဆေးရုံ ခေတ်မှီပြည့်စုံသောစက်ကိရိယာ၊ ဆေးဝါးနှင့်ကုသမှုပိုင်းဆိုင်ရာအပြည့်အစုံ ရှိပါသည်။ အရေးပေါ်ဆေးကုသခန်း ၊ရောဂါရှာဖွေခြင်း ၊ဆေးကုသခြင်း ၊ ကျန်း မာရေးဝန်ဆောင်မှုများအားလုံးပြည့်စုံခြင်း ၊အ ပြင်တရုတ်တိုင်းရင်းဆေးဝါးနှင့် ဆေးခန်းများပါရှိပါသည်။
နေရာထိုင်ခင်း နိုင်ငံတကာကျောင်းသားများအားလုံးအတွက် ပထနှစ်စာသင်ချိန်ကာလအတွင်း နေထိုင်နိုင်ရန် ကျောင်းဝင်းအတွင်းတွင်အဆောင်များရှိသည်။ လေးယောက်လျှ င်တစ်ခန်းနေထိုင်ရပါမည်။
သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး ကျောင်းအတွင်းရှိနေရာများအားလုံးသို့ အလွယ်တကူ သွားနိုင်ရန်ပို့ဆောင်ပေးသော အခမဲ့လျှပ်စစ်ကားများထားရှိပေးထား ပါသည်။မြို့ ထဲ သို့မဟုတ်အခြားနေရာများသို့ သွားလာရန် တက်ခ်စီများ မီနီဘတ်စ်များကို လွယ်ကူစွာဆက်သွယ်ခေါ်ယူနိုင်ပါသည်။
အားကစားဝန်ဆောင်မှူ •	မိုးလုံလေလုံအားကစားခန်းမ •	Gym အားကစားခန်းမ •	ဘတ်စကက်ဘောကွင်း •	ကြက်တောင်ကွင်း •	အားကစားလုပ်ရန်လမ်းများနှင့်ကွင်းပြင်ကျယ် •	တင်းနစ်ကွင်း •	အိုလံပစ်ရေကူးကန် •	ကျန်းမာရေးလေ့ကျင့်ရန်ပန်းခြံ •	အပြေးလေ့ကျင့်ရန်လမ်းကြောင်းများ •	စက်ဘီးစီးလမ်းများ
ထိုင်းဘတ် အမေရိကန်ဒေါ်လာ * စာသင်ကြားရေးစရိတ်များ - ပညာသင်နှစ်၏နှစ်တစ်ဝက်စာဘွဲ့ကြို တန်းအတွက်ကုန်ကျမှုနှုန်းထားများ ၂၆၀၀၀ - ၇၈၀၀၀ ၈၁၃ - ၂၄၃၈ - ပညာသင်နှစ်၏နှစ်တစ်ဝက်စာဘွဲ့လွန် တန်းအတွက်ကုန်ကျမှုနှုန်းထားများ ၂၅၀၀၀ - ၁၄၃၀၀၀ ၇၈၂ - ၄၄၆၉ အခြားကုန်ကျစရိတ်များ (ဘွဲ့ကြို) - ကျောင်းလျောက်လွှာတင်ခြင်း - အင်္ဂလိပ်စာ အရည်အသွေးမြင့်တင်ရေး သင်တန်းများ Intensive English / Upper Intensive English Programmes - တရုတ်စာအရည်အသွေးမြင့်တင်ရေး သင်တန်းများ Intensive Chinese / Upper Intensive Chinese Programmes - ပညာသင်နှစ်၏ နှစ်တစ်ဝက်စာတိုင်းအတွက် တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်း အတွင်းရှိ အဆောင်များတွင် လေးယောက်လျှင်တစ်ခန်းနေထိုင်ခြင်း ၊အဆောင်အတွင်းပစ္စည်းအသုံး - အဆောင်များ၏ ပျက်စီးမှုနှင့်ပက်သက်ပြီးအာမခံထားရှိရခြင်း (ဘွဲ့ရပြီးနောက်ငွေပြန်လည်အမ်းပေးပါမည်။) - ပညာသင်နှစ်၏နှစ်တစ်ဝက်စာတိုင်းအတွက်အထွေထွေထိန်း သိမ်းစောင့်ရှောက်မှုစရိတ် - တက္ကသိုလ်ကျောင်းဝင်းအတွင်းနေထိုင်ရေးနှင့် ပညာသင်ကြား ရေးအဆင်ပြေစေရန်အတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးသောအစီအစဉ် - ကျောင်းသားသစ်များအတွက် လိုအပ်မည့်အသုံးအဆောင်များရောင်းချပေးခြင်း - ကျန်းမာရေး အာမခံ( နှစ်စဉ်) - မယ့်ဖားလုံတက္ကသိုလ် အတွင်းတည်ဆောက်ထားရှိသောဆေးရုံ၌ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးခြင်း - ဘဏ်အကောင့်နှင့် ကျောင်းသားကတ်များလုပ်ဆောင်ခြင်း (ATM) အခြားကုန်ကျစရိတ်များ (ဘွဲ့လွန်) - ကျောင်းလျောက်လွှာတင်ခြင်း - ကျောင်းသားရေးရာစာရင်းသွင်းခြင်း - ပစ္စည်းအသုံးအဆောင်များ၏ ပျက်စီးမှုနှင့်ပက်သက်ပြီးအာမခံထားရှိရခြင်း (ဘွဲ့ရပြီးနောက်ငွေပြန်လည်အမ်းပေးပါမည်) - အထွေထွေထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်မှုစရိတ် (နှစ်စဉ်) - ကျန်းမာရေးနှင့်မတော်တဆမှုများအတွက် အာမခံထားရှိခြင်း (နှစ်စဉ်) - ဘဏ်အကောင့်နှင့် ကျောင်းသားကတ်များလုပ်ဆောင်ခြင်း ( ATM) မှတ်ချက်။	။ * အမေရိကန် ၁ဒေါ်လာ=၃၂ ဘတ် (အပြောင်းအလဲရှိသည်) မယ့်ဖွါလွမ် ကျူရှင်စရိတ်များကို ယခင်နှစ်များထက်လျှော့ထားပေးပါသည်။
၁၀၀၀ ၂၁၀၀ ၅၀၀
၃၂ ၆၆ ၁၆
၃၀၀ ၂၃၀၀ ၂၀၀
၁၀ ၇၂ ၇
မယ့်ဖါလွမ် ကျောင်းနေရန်လိုအပ်ချက်များ ရိုးရိုးဘွဲ့
• ပညာရေးဝန်ကြီးဌာနမှာပေးအပ်သော အထက်တန်းအောင်မြင်
နောက်ဆုံးအောင်မြင်ခဲ့သည့်အတန်း၏ ရမှတ်များ ၊ ပျမ်းမျှရလဒ်ပေါင်း ၂.၅
• အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းလိုအပ်ချက်များ ၄၅၀
- တိုဖယ် ( အင်တာနက်ဖြေ)
- တိုဖယ်( ကွန်ပြူတာနှင့်ဖြေ)
- IELTS (နှစ်အလိုက် သင်ရိုးတစ်ခု၏သီးခြား.ယူနှစ်)
- မယ့်ဖါလွမ် (MFU-TEP)
(က) လေ့လာမည့်နယ်ပယ်ပေါ်မူတည်ပြီး အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းလို
ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသို့ စာရင်းသွင်းတက်ရောက်ရမည်။
ည် နှစ်နှစ်တာ ကာလအတောအတွင်းအကြုံးဝင်ပါသည်။
(ဂ) အဓိကအင်္ဂလိပ်ဘာသာစကားဖြင့် သင်ကြားသောကျောင်း(အ
နည်းဆုံးသုံးနှစ်) သင်ကြားအောင်မြင်လာသော ကျောင်းသားများအနေဖြင့်လည်း
ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော အင်္ဂလိပ်စာသင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရန်လိုအပ်ပါသည်။
ပိုမိုအဆင့်မြင့်သောအင်္ဂလိပ် စာသင်တန်းသို့ တက်ရောက်ရပါမည်။
(င) ကျောင်းသားများ၏ အထက်ပါအရည်အချင်းဖော်ပြချက်များကို
School of Liberal Arts မှ စစ်ဆေးအတည်ပြုဆုံးဖြတ်ပေးပါမည်။ • တရုတ်ဘာသာစကားအတွက်သတ်မှတ်ချက်(တရုတ်ဘာသာစကားသင်ကြား မည့် ကျောင်းသားများသာ)
- HSK Level3သတ်မှတ်ချက်များ-
လက်မှတ်မရှိသေးသောကျောင်းသားများ ကျောင်းမှဖွင့်လှစ်ထားသော တရုတ်စာသင်တန်းသို့ စာရင်းသွင်းတက်ရောက်ရမည်။
(ခ) တရုတ်ဘာသာစကားကျွမ်းကျင် လက်မှတ်ရှိသောကျောင်းသားများ
ကျောင်းမှဖွင့်လှစ်ထားသော ပိုမိုအဆင့်မြင့်သော တရုတ်စာသင်တန်းသို့ စာရင်းသွင်းတက်ရောက်ရမည်။
• မာစတာဘွဲ့သို့မဟုတ် သက်ဆိုင်ရာတက္ကသိုလ်မှ အသိအမှတ်ပြု စာ၊ရိုးရိုးဘွဲ့ (ဂုဏ်ထူး) အောင်မြင်ပြီးဆုံးကြောင်းနှင့် ပျမ်းမျှအမှတ်ပေါင်း ၃.၂၅ သို့မဟုတ်၎င်းနှင့်အထက်ရှိရပါမည်။ • အင်္ဂလိပ်စာအရည်အချင်းလိုအပ်ချက်များ
- မယ့်ဖွါလွမ် (MFU-TEP)
အဆင့်မြင့်သုတေသနစင်တာများ • သဘာဝထုတ်ကုန်ပစ္စည်းများ ဆန်းသစ်ပြောင်းလဲရေးအတွက် အဆင့်မြင့်သုတေသနဌာန • မှိုသုတေသနအတွက်အဆင့်မြင့် သုတေသနဌာန • တောင်ပေါ်နေလူမျိုးစုများ၏ကျန်းမာရေး မြှင့်တင်ရေးအတွက် အဆင့်မြင့် သုတေသနဌာန (CEHR) • စီးပွားရေးဘောဂဗေဒနှင့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်အတွက်ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး သုတေသနဌာန (BE-LOGIST) စီမံဖွဲ့စည်းမှုအတွက်အထူးကောင်းမွန်သော သုတေသနဌာန
• သဘာဝအလှကုန်ထုတ်နည်းပညာ • အပင်မှရရှိသော သဘာဝကုန်ကြမ်းပစ္စည်းများမှထုတ်ယူသောအလှကုန်များနှင့် ဓါတုဗေဒဆေးများ ပါဝင်သောအလှကုန်များ • စွမ်းအင်နှင့်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများဆိုင်ရာ သုတေသန (MEE)
• (UP-T) ခေါ် သီးနှံစိုက်ပျိုးရိတ်သိမ်းမှုနှင့်ပက်သက်သော နည်းပညာ • လူသားအူလမ်းကြောင်းအတွင်းနေထိုင်သော ဘက်တီးရီးယားစနစ်အကြောင်း လေ့လာသော ကျန်းမာရေးသုတေသန အထူးပြုလေ့လာမှုများ
အထူးပြုစံနုန်း • နေရာဒေသတစ်ခုချင်းစီအပေါ်မူတည်၍ ဒေသဆိုင်ရာလူမှုရေး ဆန်းသစ် ပြောင်းလဲမှုအတွက်သုတေသနပြုလုပ်ခြင်းစင်တာ (Ab-SIRC) • နယ်စပ်စီးပွားရေးနှင့် လုပ်ငန်းတစ်ရပ်အတွက် ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး စီမံဖွဲ့စည်းမှုအတွက်လေ့လာခြင်း (O-BELS) • လက်ဖက်နှင့်ပက်သက်သောလေ့လာမှုအဖွဲ့အစည်း
ပညာသင်နှစ်ဆိုင်ရာစာစောင်များ • မယ့်ဖါလွမ်တက္ကသိုလ်နှင့်ပတ်သက်သောသတင်းဆောင်းပါး စာစောင်များ (လူသားမျိုးနွယ်နှင့် လူမှုရေးသိပ္ပံ ပညာရပ်ဆိုင်ရာစာစောင်) • စိုက်ပျိုးရေးအသုံးချနည်းပညာ နှင့် အစားအသောက်ပိုင်းဆိုင်ရာသုတေသနစာေ စာင် (JFAT) • ဘာသာစကားနှင့် ဘာသာဗေဒပညာရှင်ဆိုင်ရာစာစောင် • အပင်များဆိုင်ရာရောဂါဗေဒနှင့် ပိုးမွှားကူးဆက်ခြင်း • လက်ရှိပတ်ဝန်းကျင်ဆိုင်ရာသုတေသနနှင့် လက်တွေ့အသုံးချမှိုစိုက်ပျိုးရေး နည်းပညာ
GMS သိသ့ွုားရာလမ်း အာဆီယနံငို င်တံ၏့ို အလယ်ဗဟိတုငွရ်ှေိ သာ ပန်းဥယျာဉ်များထဲကတက္ကသလို မ်ယ်ဖါလွမ်
Fact Sheet Myanmar 2017